Izindaba - Iphasise ngempumelelo isitifiketi sokusebenza se-international aluminium management (ASI) sokusebenza kwesitifiketi se-aluminium Sheet, ikhoyili ye-aluminium, ibhizinisi lokukhiqiza i-aluminium kanye nebhizinisi lensizakalo yokuthengisa
Muva nje, iZhejiang ubuchwepheshe obusha be-aluminium co., LTD idlule ngempumelelo isitifiketi sokusebenza se-aluminium (ASI) sokusebenza esijwayelekile se-aluminium Ishidi, ikhoyili ye-aluminium, ukukhiqizwa kwe-aluminium foil kanye nebhizinisi lenkonzo yokuthengisa .SiyiNombolo 96 emhlabeni wonke futhi inombolo yesi-10 e-China yokunikezwa isitifiketi kwe-ASI, lokhu kumaka iNew Aluminium Tech Co ltd ngokuhambisana nokuhambisana okufanele kokufakwa kwempahla ye-ASI nokukhishwa kokuphathwa kwesayensi nobuchwepheshe kwezimo ezihlobene futhi kunganikeza i-aluminium Ishidi, ikhoyili ne-aluminium ucwecwe olunikezwe isitifiketi se-ASI
I-ASI (i-Aluminium Management Initiative) yinhlangano yomhlaba wonke, yababambiqhaza abaningi, engenzi nzuzo yokubeka amazinga kanye nezitifiketi ezinombono wokukhulisa umnikelo we-aluminium emphakathini osimeme. Amazinga wokusebenza kwe-ASI achaza imigomo namazinga ezemvelo, ezenhlalo nezokuphatha ukubhekana nezinkinga zokusimama ochungechungeni lwamanani e-aluminium. Ziye zamukelwa emhlabeni jikelele njengezinga eliphakeme kakhulu lemikhuba yokubusa kwezemvelo, yezenhlalakahle kanye neyezinkampani ezihlobene nochungechunge lwe-aluminium value futhi ziyahambisana kuwo wonke umjikelezo wempilo wokukhiqizwa kwe-aluminium, ukusetshenziswa kanye nokuvuselelwa kabusha. i-aluminium ukufeza inhloso yentuthuko esimeme ye-aluminium
Ukuze kusebenze umqondo omusha wentuthuko futhi kuthuthukiswe intuthuko esezingeni eliphakeme, iNew Aluminium Tech Co Ltd ifake intuthuko eluhlaza nokusimama isu layo eliyinhloko lebhizinisi. NgoMeyi 2019, wajoyina i-ASI Organisation futhi waba yilungu le-ASI Production and conversion Process Group. Sesiqalile ukusungulwa kohlelo olujwayelekile lwe-ASI Performance standard kanye ne-standard ASI yokuphathwa kohlelo. NgoJulayi wangonyaka ka-2020, i-International Aluminium Industry Management Initiative Organisation yenze ucwaningomabhuku esizeni samazinga wokusebenza kwe-ASI kithi. Ngemuva kokucwaningwa kwamabhuku okuqinile, iZhejiang New Aluminium Technology Company ekugcineni idlulise ngempumelelo ukucwaninga okwenziwe esizeni kwamazinga wokusebenza we-ASI